Xukuumadda somaliland oo shaacisay wakhtiga la qabanayo wareegga labaad ee ciyaaraha gobollada. |
Xukuumadda somaliland oo shaacisay wakhtiga la qabanayo wareegga labaad ee ciyaaraha gobollada.
Xukuumadda Somaliland, ayaa shaacisay wakhtiga loo oqrsheeyey in qeybta labaad ee Ciyaaraha gobollada dalku ka bilaabmaan Caasimadda Hargeysa, ka dib markii uu hirgelintoodii hore fashilantay, isla markaana markii ay hawsha ciyaaruhu socon wayday is-casilay Wasiirkii hore ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland.
Wasiir Ku-xigeenkii hore ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Yuusuf Cismaan Garas oo shalay ka hadlayey Xaflad uu xilkii ku wareejinayey, ayaa sheegay inuu jiray khalad farsamo bilawgii Ciyaaraha gobollada oo ku beegmay wakhti Waxbarashadii Dugsiyada dalku socdeen.
“Inbadan ayaa isweydiinaysa sababta qeybtii labaad ee ciyaaraha Goboladu uga bilaabmi waayeen Caasimadda Hargeysa, balse waxa jiray khalad farsamo ka dhacay bilawgii Ciyaaraha oo ku beegmay xilli waxbarashadii dugsiyada dalku socdeen.” Sidaa ayuu yidhi Yuusuf Cismaan Garas.
Mr. Garas ayaa sheegay in Guddi Madaxweyne Siilaanyo u saaray go’aaminta xilliga ku habboon qabashada qeybtii labaad ee Ciyaaraha gobollada, ayaa sheegay inay u qorsheeyeen horraanta sannadka cusub, waxaanu yidhi; “Ka dib Guddi Wasiirro ah oo Madaxweyne Siilaanyo u saaray ka soo talo-bixinta xilliga ku habboon qabsoomidda qeybtii labaad ee Ciyaaraha gobollada waxay isla qaateen in la qabto xilliga fasaxa yar ay galaan Ardayda Dugsiyada oo ku beegan Badhtamaha Bisha koowaad ee sannadka cusub, inkastoo go’aanka kama dambaysta uu yeelan doono Wasiirka cusub ee Dhalinyarada iyo Ciyaaraha.”
Hadalka Wasiir Ku-xigeenkii hore Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Yuusuf Garas, ayaa meesha ka saaray werwer bulshada Somaliland iyo gaar ahaan Ciyaaryahannada gobolladii u soo baxay Wareegga labaad ee Ciyaaraha gobollada oo loo qorsheeyey inay ka dhacaan Caasimadda Hargeysa ka qabeen xilliga la qabandoono.